RSS ugu dir Email Xalka WordPress
Isniin, Janaayo 10, 2011 Jimce, Maarso 1, 2013 Douglas Karr
Ololahayga Pro iyo saaxiibkiis, Bill Dawson, ayaa aasaasay midkeenna cusub warside todobaadle ah taasi maanta uun baa la bilaabay. (Haddii aadan iska qorin, waxaad seegaysaa in ka badan $ 12,000 oo abaalmarino ah… iyo sii kordhaya!).
Si loo fududeeyo, Luke Newton ee My Campaign Pro, deji shax ku dhex jirta nidaamka oo si fudud HTML uga qaadaya meel kasta oo shabakadda ah - ha ahaato quudin ama bog firfircoon HTML. Tan waxaa loogu yeeraa qeyb yar oo nidaamkiisa ah waxayna tilmaami kartaa nuxurka la keydiyay, waxay leedahay waxyaabo firfircoon, ama ka soo jiidan karto RSS ama bogga:
Tallaabada xigta waxay ahayd si fudud in loo tixraaco guntinta ku jirta HTML-ka shaxanka emaylka iyadoo la adeegsanayo xarig beddelaad ah:
Kadibna Bill ayaa barnaamij ka sameeyay barnaamij ka tirsan WordPress oo la yiraahdo Newsletter taas oo kaliya lagu soo bandhigayo bog gudaha ah oo qarsoon lagana reebay wixii qoraal ah ee ku qoran barta. In WordPress, tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu darayo qaar ka mid ah walxaha weydiinta ee ka sarreeya wareegga:
weydiimaha_posts ($ query_string. '& cat = -4835');
Waxaan sidoo kale cusbooneysiinay quudinta si aan uga saarno wixii qoraallo ah, ee lagu dhammeeyo 'querystring':
Maxay tan u weyn tahay? Toddobaad kasta, waxaan qorayaa qoraallo qoraal ah oo ku saabsan qaybta Wargeyska ka dibna fulinaya ololaha dirista. Nidaamku wuxuu si otomaatig ah u xoqayaa waxyaabaha ku jira bogga u gaarka ah (iyo sidoo kale qormadayda Twitter) iyo emaylka ayaa la soo saaraa oo la diraa. Kaliya ma ahan tan weyn ee kaliya inaan ka walwalo qoritaanka waxyaabaha ku jira WordPress… Waxaan sidoo kale yeelan doonaa nuqul ka mid ah dhammaan e-maylkeyga la soo diray!
Luke wuxuu bixinayaa 2 liisanka sanadlaha ah (oo ay la socoto ilaa 500 e-mayl oo la soo diro) oo ay weheliso taageero - markaa iska hubi inaad iska qorto Warsidaha Teknolojiyada Suuq geynta fursad aad ku guuleysato!
Tags: warsidaha blogblog u soo dirEmail Marketing
Ma Tijaabisay Ololahaagii Ugu Dambeeyay?
Jan 10, 2011 saacadu markay ahayd 10:41 PM
Waad ku mahadsantahay boostada Doug! Aad ayaan ugu faraxsanahay warsidaha cusub waxaanan ku hanweynahay inaan ka mid ahaano!
Waxaan ogaanay in tani ay tahay wado wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha WordPress culus si ay usii wataan adeegsigooda matoor qoraalkooda ay jecelyihiin si ay u abuuraan nuxur una wada dhigaan hal meel.
Awoodda runta ahi waxay awood u leedahay inay keento isla heer otomaatig ah oo laga heli karo WordPress si loo soo diro. Kaliya soo jiid mawduuca oo ku dar dir jadwal joogto ah oo jadwal ah oo loogu talagalay emayl taxane ah oo iswada leh oo leh dayactir yar oo socda Nuqul iyo dhejis dheeri ah malahan - mar uun dhis oo automate!
Iyo dhammaan waxyaabaha ku jira WordPress - way fududahay in loo qaybiyo waxyaabahaas ka baxsan emaylka.
Haddii aad tahay isticmaale isticmaale WordPress -waxay macno u leedahay inaad sidan ku sameyso!
Sidoo kale - waxaan jeclaan lahayn inaan u rajeynno nasiib wacan qof kasta oo ku soo biira tartanka - aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqonno dabaaldegga boostada 2,500th!